Maxay ku dambeyn doontaa xaalada Qatar? - BBC News Somali
Haddabo Maxay ku dambeyn doontaa xaalada Qatar? su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaanu weydiinay Dr. Sacad Sheekh Cismaan oo ka faalooda arrimaha caalamka. wuxuuna u warramay weriyaha BBC-da Bashir Maxamed Caato.
Maqal Donald Trump oo saxiixay sharci magangalyada loogu diidayo dadka soo gala Mareykanka
Donald Trump oo saxiixay sharci magangalyada loogu diidayo dadka soo gala Mareykanka